Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa fuulasaa gara Chaayinaatti garagalfachaa jiraa? - BBC News Afaan Oromoo
Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa fuulasaa gara Chaayinaatti garagalfachaa jiraa?
Qabeenyaa Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa kan ta'e Beoing 737 Max 8 erga Bitooteessa keessa kufee cacabeen booda dhaabbatichi xiyyaarota walfakkaatan hojii dhabsisuusaa beksiisee ture.
Hojii Gaggeessaa Daandii Xiyyaara Itoophiyaa Obbo Tawalda Gabramaariyaam odeeffannoo Madda Oduu Chaayinaa 'Shiniwaa'f kennaniin akka himanitti, koree waa'ee xiyyaaroota dhaabbanni Chaayinaa Komaam jedhamuun omishaman 'C919' hordofu hundeesseera.
Amansiisummaa xiyyaarota kanneenii to'achuuf Injinaroonni Daandii Xiyyaara Itoophiyaa Komaak waliin walitti dhiheenyaan hojjataa jiraachu Shinwaan gabaaseera.
Chaayinaan xiyyaara Airbus 300 ajajatte
Balaan mudate balaliistotatti miira attamii umee?
Xiyyaarri 'C919' Chaayinaan omishamee kan jalqabaas bara 2017'tti ture buufata xiyyaaraa addunyaa Shaangaayii Pudoongii ka'uun balaliinsaa yaaliin kan taasisee ture.
Kubaaniyaan Chaayinaa xiyaaroota 'C919' jedhamaniif hajaja omishaa 300 ol kan fudhatan yoo ta'u, xiyyaarotas bara 2021tti kennuu akka eegalu ibsa.
Daandiiwwan xiyaaraa hajaja omishaa kennan hundinu Chaayinaadhummarrayi.
Dhuguma daandiin xiyyaaraa fuulasaa gara Chaayinaatti naanneessaa jiraa?
Maanaajarri Komunikeshinii Daandii Qillensa Itoophiyaa Obbo Asiraat Bagaashaawu akka jedhaniitti, Chaayinaan Itoophiyaa waliin ta'ee Afrikaa mara waliin dameewwaninvastimantii, daldalaafi kan biroo irratti walta'insaa taasisaa kan turte waan ta'eef Daandiin Qilleensa Itoophiyaas gama damee Aviyeeshinitiin dhaabbilee Chaayinaa waliin hojjataa turusaa yaadatu.
Itti dabaluunis, daandiin qilleensaa bakkeewwan Chaayinaa shanitti balaliinsa akka taasisuu eeruun, dhaabbilee Chaayinaa waliin walitti dhufeenya taasisuunsaa kana dura kan tureefi gara fuuladuraattis kan itti fufuudha jedhu.
Daqiiqaawwan 6 dhumaa xiyyaara Itoophiyaa ET302
''Oduun Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa xiyyaaronni omisha Chaayinaa ta'an bituuf jedhus garuu dhimma sadarkaa yaadaarratti argamu malee dhimma xumurame miti,'' jedhu Obbo Asiraat.
Kana malees, odeeffannoon dhaabbanni isaanii xiyyaaroota Boeing Max dhiisuun fuulasaa gara Chaayinaatti naanneefaterra jedhu dogongoraafi kan hinmirkannoofine ta'usaa Hojii Gaggeessaa Daandii Xiyyaara Itoophiyaa Obbo Tawald Gabramaariyaam irra deddeebiin ibsiuunsaanii ni yaadatu.
Walitti dhufeenyi daldalaafi invastimantii Chaayinaafi Itoophiyaa jidduutti taasifamu damee hundaan akka itti fufu dubbatu Obbo Asiraati.
Dhaabbanni Chaayinaa xiyyaarota omishuufi Komaak jedhamuun beekamuufi Daandii Xiyyaara Itoophiyaa jidduutti waliigaltee attamiitu taasifamee? jechuun gaaffii dhiyaateef Obbo Asiraati deebii yoo kennan, waliin dubbachuun kan eegalame waggaa lamaa ol ta'u himanii, kunis ganaa waan hinxumuramneefi gara fuuladuraatti kan itti fufuudha jechuun ragaa dabalataa kennurra of qusataniiru.
Chaayinaan dandeettii Boeing fi Airbus dorgomu qabdii laata?
Chaayinaan yeroo dhihootti industirii ayiveshinii addunyaa to'achuudhaaf yaaduun waggoota kurnan darbaniif xiyyaarota ammayyaa kan mataashee omishaafi yaalaa turte jirti.
Xiyyarota kubaaniyaan Chaayinaa Komaak jedhamu omishurratti qeequmsi hedduun ka'ulleen daandiiwwa qilleensaa biyya keessaa Chaayina garuu xiyyarotatti fayyamu kan dhorke hinjiru.
Akka raagaa oggeessoota damichaatti yoo ta'e, xiyyaaronni Chaayinaan omishtu yeroo dhihoo keessatti gabaa omisha Beoing fi Airbus fudhachuun saanii hinolu.
Damee ayiveshinitiin hojii gorsaa kan hojjatan Shukur Yoseef akka jedhanitti, gabaa Chaayinaa cabsanii galuun kan akka salphaatti ilaalamu miti.
''Dameen ayiveshinii dhiheenyatti omishitottoa Awuroppaafi Ameerikaa qofaan ta'un hafee qaamni dabalataa sadaffaan galunsaa kan hinolleedha. Biyya dandeettiifi tekinologii Chaayinaa caalaa qabu yaaduun ammoo rakkisaadha,'' jedhu.
Daandii qilleensaa Itoophiyaa kan Afriikaatti duraa ta'eefi kanneen biroos walitti dhufeenyi isaan Beoing fi Airbus waliin qaban kana booda bifa attamii itti fufuu danda'a kan jedhuu ammoo waan yeroo keessa hiikamu ta'a.
Obbo Asiraat Bagaashaawu akka jedhanitti, walitti dhufeenyi daandii qilleensaafi Beoing qaban kan waggoota 70f tureedha.
''Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa omisha xiyyaaroota omisha Beoing ta'an 80 ol qaba. Xiyyaarota kanneenis ammalleen itti fayydamaa jira,'' jedhu.
Ammas walitti dhufeenyi daandii qilleensaa Itoophiyaa Beoing waliin qabu naga qabeessaafi akkuma duraa dhimma daldalaa irratti kan xiyyeefateedha jedhu.
Xiyyaaroonni Beoing 737 max addunyaarratti argaman walumagalatti 370 yoo ta'an Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa afran isaatti fayyadamaa ture. Garuu balaa baatii Bitooteessaa darbe keessa mudatee tureen walqabatee tajaajila irraa ugureera.
''Xiyyaaronni kunneenis wayita ammaatti dalaadhuma daandii xiyyaaraa keessatti haaluma sadarkaa addunyaatti nageenyaansaanii eegamuun dhaabataniiru. Daandiin qilleensaas gara fuuladuraatti murte keeenu irratti hundaa'uun tarkaanfii barbaachisaa kan fudhatu ta'a,'' jedhaniiru.
Xiyyaaronni kubaaniyaan Chaayinaa Komaak omishu ulaagaalee nageenya biyyattiifi kanneen biraa gutuu isaanitiin hayyama Chaayinaa dabalatee biyyoota akka Afriikaa, Afriikaa Kibbaa, Ameerikaa Kaabaa fi biyyoota Eshiyaa tokko tokkotti balali'u dandeessisu argateera.
Haata'u malee, xiyyaaronni kunneen gabaa addunyaa keessa galuun dorgomtoota ta'uuf ammalleen hayyamni Ameerikaafi kan biyyota Awurooppaa ni barbaachisa.
Xiyyaarota kanneeniif biyyota irraa hayyama argamsiisuun ammoo qormaata olaanaa Chaayinaa eeggatu ta'a.
Balaa Xiyyaaraa Itoophiyaa
Airbus Chaayinaa irraa ajaja xiyyaaraa doolaaraa biliyoona hedduu argate